Indawo ezigqibeleleyo zokutyela eDenver - Ukutya
Amantombazana Okuqhelekileyo Clothing
Indawo ezigqibeleleyo zokutyela eDenver
Iindawo zokutyela ezilungileyo eDenver ziqhuba i-gamut ukusuka kwi-sushi ukuya kwi-burger, ke kukho into eyenzeka kuyo yonke incasa okanye umnqweno. Ezinye zeendawo zokutyela zithathwa njengeyona nto ibalaseleyo eDenver eneneni ingaphandle kweDenver, iikhilomitha ezingama-30 kude neBoulder. Nangona kunjalo, ngosuku olunezithuthi ezincinci kunye nemozulu elungileyo, idrive ayizukuba nde kakhulu.
1. ICherry Cricket
I-American, Mexican, kunye ne-pub
Ipuni yedolophu ithi iipesenti ezingama-81 zeevoti ezili-1027 zazintle kule restyu. Lindela ukuhlawula i- $ 10 okanye ngaphantsi kokungena. Ukuphonononga kuchaza ukuba zonke iintlobo zabantu zixhomekeke kule ndawo yokutyela enebha yommelwane oziva ngathi ngoosomashishini, iimvumi, abalandeli bezemidlalo, kunye nokunye. Uninzi lokuphononongwa luye lwahamba malunga nokukhetha ibhega.
Indawo yeWebhusayithi: ICherry Cricket
Ixabiso: $ 10.00
2. ISushi Den
IJapan, iAsia, kunye neSushi
Ipuni yedolophu uxela ukuba iipesenti ezingama-83 zabantu bayayithanda indawo yokutyela esekwe kwivoti ezingama-803. Lindela ukuhlawula i-25 yeedola ukuya phezulu ngefowuni nganye. Ababuyekezi baxela umoya opholileyo, ococekileyo kunye noluhlu lokulinda olufanelekileyo. Amagqabantshintshi malunga nenkonzo nawo ayakhayo, ebiza abasebenzi ukuba babe nobubele, bemamele, kwaye babe ziingcali.
Indawo yeWebhusayithi: USushi Den
Ixabiso: $ 25.00
3. IVesta Yodipha Grill
Okwamanye amazwe kunye neMelika
IVesta Dipping Grill, nomxube wayo wokutya kwaseMelika nakwamazwe aphesheya, ifumene amanqaku angaphantsi kwe-4.0 ngaphandle kweenkwenkwezi ezi-5.0 e Itheyibhile evulekileyo ukutya, i-ambiance, kunye nenkonzo, kunye nokulinganiswa kwe-430. Ngophononongo oluyi-96 Ukukhangelwa kwesiXeko , amanqaku apheleleyo yi-4.5 ngaphandle kweenkwenkwezi ezi-5.0. Lindela ukuhlawula i-31 ukuya kwi-50 yeedola ngokungena. Le ndawo yokutyela ibalaseleyo eDenver yavotelwa indawo eshushu kunye neyona ndawo ininzi ibhukishwe eDenver ngokweTafile evulekileyo.
Indawo yeWebhusayithi: IVesta yokudibanisa iGrill
Ixabiso: $ 45.00
Ophumelele imbasa yeJames Beard Foundation, eRioja, indawo yokutyela ethatha inxaxheba ekutyeni kweMeditera. Lindela ukuhlawula phakathi kwe- $ 31 kunye ne- $ 60 yokungena ngokutsho Yelp.com , apho amanqaku amalunga ne-4.5 ngaphandle kweenkwenkwezi ze-5.0 ngokusekwe kuphononongo lwe-287. Amagqabantshintshi avela kubavavanyi akhankanya abasebenzi abanobuhlobo, iincasa ezimnandi, kwaye ukulinda ukuhlala kungaziwa ngokude.
Indawo yeWebhusayithi: IRioja
Ixabiso: $ 50.00
IsiCreole / isiCajun, isidlo sakusasa / ibrunch
U-Lucile ufumene u-4.0 ngaphandle kweenkwenkwezi ezi-5.0 ngo Yelp.com ngokusekwe kuphononongo lwe-182 kunye neepesenti ezingama-79 ezivotelweyo 'Ndiyayithanda' kwi NgokweSpoon.com . Ababuyekezi bakhankanya ukuba ukuhamba ngomnyango kufana nokungena eNew Orleans. Elinye icala, nangona kunjalo, kukulinda okuhlala kubandakanyeka ukuhlala phantsi. Kukho indawo ezimbini kwindawo yaseDenver. Enye ikwiSitalato iLogan eDenver enye ikwisitalato se-14 kwiBoulder ekufutshane. Lindela ukuhlawula i-10 ukuya kwi-15 yeedola ngokungena.
Ixabiso: $ 12.00
6. UFrasca Ukutya newayini
Le restyu ineenkwenkwezi ezi-4.5 kwezi-5.0 nge Uncedo ngokusekwe kuvavanyo lwe-112. Into oyifumana kuFrasca Ukutya newayini yindibaniselwano yolwazi lwewayini olunomdla, ukutya okumantla e-Italiya, kunye nenkonzo engummangaliso ethi uphononongo ilungelelaniswe ngokugqibeleleyo, iphantse yangumdaniso. Inkuthazo ivela kwingingqi yeFruili e-Itali, enokudibanisa iinkcubeko kunye nothando olukhulu lomhlaba, kwaye oko kuthetha ukuba ukutya ayisiyiNtaliyane yakho esemgangathweni. Lindela ukuhlawula i- $ 60 okanye ngaphezulu ngomntu ngamnye.
Indawo yeWebhusayithi: Ukutya kweFrasca kunye newayini
Ixabiso: $ 60.00
Eluhlaza Food Diet Plan Iivalentine Imihla I-Tattoo Care Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi Iimpawu Nobuntu Amapati Okuzalwa
I-Origami Izipho Nokuhonjiswa
Njani To Projects
indlela yokugcina ikati efayo
yintoni yokondla inja enesifo sorhudo
ungabuyisa iringi yokuzibandakanya
Izimvo ezimnandi zokuveza isini sabantwana
ungahamba nge-16 eMichigan